काठमाडौं । मेसेडोनियामा प्रदर्शनकारीहरुको एक समूहले संसद भवनमै प्रवेश गरेर सांसदहरुमाथि हमला गरेको छ । त्यहाँको सभामुखमा एक अल्बेनियाली जातीय नेता निर्वाचित भएपछि विरोध प्रदर्शन भएको हो । प्रदर्शनकारी...
मोदी आतंककारीको निशानामा रहेका खुलासा
नयाँदिल्ली । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हत्या गर्ने योजना रहेको खुलासा भएको छ । प्रधानमन्त्री मोदी र उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ आतंकवादीको निशानामा रहेको भारतीय गुप्तचर एजेन्...
एजेन्सी । भारतीय प्रमुख तीन शहर मुम्बई, हाइदरावाद र चेन्नईस्थित विमानस्थलबाट आइतबार विमान अपहरण प्रयासको हल्ला चलेपछि उक्त विमानस्थलमा उच्च सतर्कता अपनाएको यहाँका अधिकारीले जनाएका भारतीय सञ्चारमाध्यम...
मङ्लबार, चैत्र २९, २०७३
काबुल । अफगानिस्तानका विभिन्न ठाउँमा भएका सुरक्षा कारबाहीमा परी कम्तीमा ४६ जनाको मृत्यु भएको छ । अफगानिस्तानको गृह मन्त्रालयले मङ्गलबार दिएको जानकारीअनुसार गत २४ घन्टाको अवधिमा सरकारी सुरक्षा फौजले ग...
सिरियामा प्रयोग भएको रसायनिक हतियार वेलायतले दिएको खुलासा
काठमाडौं । सिरियामा अघिल्लो हप्ता भएको सरिन नर्भ ग्यास आक्रमणमा परी ८० भन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो र सयौं अन्य घाइते भएका थिए । बेलायतले सन् १९८० को दशकमा असद सरकारलाई उक्त रासायनिक हतियार उपलब्ध ग...
अमेरिकाद्वारा सिरियामा मिसाइल आक्रमण
दामस्कस । अमेरिकाले सिरियामा शुक्रबार मिसाइल आक्रमण गरेको छ । आक्रमणमा परी कम्तीमा चार जना सिरियाली सैनिकहरुको मृत्यु भएको अनुगमनकर्ताले जनाएका छन् । सिरियाली शासकविरुद्ध क्रुद्ध हुने क्रममा अमेरिकाल...
कोलम्वियामा बाढी र पहिरोका कारण दुई सय ५० भन्दा बढीको मृत्यु
काठमाडौं । कोलम्बियाको दक्षिण–पश्चिम इलाकामा भारी वर्षा र पहिरोका कारण दुई सय ५० भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ । रातभरी भएको भारी वर्षाका कारण नदिमा अत्यधिक बहावपछि किनारालाई तोडेर फोहोरसँगै पानी घर–घरभि...
दक्षिण कोरियाकी पूर्व राष्ट्रपति पक्राउ
काठमाडौं । भ्रष्टाचारको अभियोग लागेर अपदस्त भएकी दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति पार्क ग्वेन हे लाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखिएको छ । अदालतले उनलाई पक्राउ गर्ने आदेश दिएपछि ६५ वर्षीया पार्कलाई सियोलको दक्षि...
स्कुले विद्यार्थी बसेको रिसोर्टमा हिमपहिरो
जापानको टोेकियो नजिक स्कुले विद्यार्थी बसेको रिसोर्ट हिमपहिरो गएको छ । पहिरोमा पुरिँदा ६ जनाको मृत्यु भएको छ । थुप्रै बेपत्ता भएका छन् । केहीको घाइते अवस्थामा उद्धार गरिएको छ । टोकियोको उत्तरी क्षेत्...
भारतले आफ्ना छिमेकी देश पाकिस्तान र बङ्लादेशसँगको सिमाना बन्द गर्न सक्ने शनिबार चेतावनी दिएको छ ।आतङ्ककारी गतिविधि र शरणार्थी नियन्त्रण गर्नका लागि ती दुइदेशसँगको सिमानामा बन्द गर्नुपर्ने भारतको भनाइ ...
शीर छेदन गरी ४० सुरक्षाकर्मीको हत्या
फाईल तस्विर एजेन्सी । अफ्रिकी मुलुक कंगोमा विद्रोही समूहले ४० जना सुरक्षाकर्मीको हत्या गरेका छन् । शीर छेदन गरी क्रुरुर तरिकाले हत्या गरेका छन् । कंगोको कसाईमा प्रहरीलाई धरापमा पारी शीर छेदन गरी हत्...
लन्डन आक्रमणकारीको पहिचान, शंकास्पद ८ प्रहरी नियन्त्रणमा
काठमाडौं । बेलायतको प्रहरीले लन्डनमा पाँच जना मारिने गरी भएको आतंककारी आक्रमणमा संलग्न मुख्य व्यक्ति ५२ वर्षीय खालिद मसुद भएको जनाएको छ । उनी बेलायतको कैट काउन्टीमा जन्मिएर हाल वेस्ट मिडल्यान्डस्मा ब...
सातबर्षका बालकलाई आत्मघाती लडाकु बनाएको भयानक तस्बिर सार्वजनिक
अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट (आइएस) विरुद्ध इराकमा सुरक्षा फौजले निर्णायक कारवाही गरिरहेकै समयमा बालबालिकालाई समेत आइएसले आत्मघाती बनाउन थालेको रहस्योद्घाटन भएको छ । हालै इराकी सेन...
लण्डनमा हमलाः अहिले सम्म के के भयो ?
काठमाडौं । बेलायती संसद भवन नजिकै बुधबार भएको आतंकवादी हमलामा एक आक्रमणकारी सहित ५ जनाको मृत्यु भएको छ, भने ४० भन्दा बढी मानिस घाइते भएका छन् । अहिलेसम्म बुधवार भएको आक्रमणबारे प्राप्त जानकारीहरु । क...
मन्त्रीले छोरीहरुलाई जागरि दिएको विवाद मन्त्रिपरिषदमा नै बढेपछि
फ्रान्सका आन्तरिक मामिला मन्त्री रुनो ल रुक्सले छोरीहरुलाई जागिर दिएको भन्ने विवाद चर्कदै गएपछि राजीनामा दिएका छन् । उनीमाथि संसदीय सहयोगीका रुपमा दुई छोरीलाई जागिर दिएर सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गर...
पूर्वी दमासकसमा भीषण भिडन्त
बेरुत । पूर्वी दमासकसमा सोमबार विद्रोहीहरुको अखाडालाई लक्षित भारी हवाई आक्रमण भएको एक मानव अधिकारवादी समूहले जानकारी दिएको छ । विद्रोहीले गोप्य सुरुङ्ग र आत्मघाती आक्रमण गरेपछि सिरियाली सरकारीबलले सो ...
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ह्वाइट हाउसमै असुरक्षित !
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाकै राष्ट्रपति भवन ‘ह्वाइट हाउस’ मा असुरक्षित रहेको तथ्य प्रकाशमा आएको छ । अमेरिकाका एक पूर्व गुप्तचर अधिकारीले अमेरिकी राष्ट्रपति ह्वाइट हाउसमै असुरक्षित रहेको...
सिरियामा भएको हवाई आक्रमणमा ४२ जनाको मृत्यु
दमासकस । उत्तरी सिरियाको अलेप्पो राज्यमा पर्ने एउटा गाउँमा अवस्थित एक मस्जिदलाई लक्ष्यगरी भएको हवाई आक्रमणमा परी बिहीबार कम्तीमा ४२ जनाको मृत्यु भएको छ । मस्जिदमा भएको यस आक्रमणमा परी मारिएका ती ४२ ज...
भारतीय वायुसेनाको हेलिकप्टर दुर्घटना
एजेन्सी । भारतको उत्तरप्रदेशस्थित इलाहावादमा भारतीय वायुसेनाको एक हेलिकोप्टर दुर्घटना भएको छ । आज बिहान भएको दुर्घटनामा हेलिकोप्टरका पाइलट भने सुरक्षित रहेको जनाइएको छ । अवतरणको क्रममा रहेको हेलिकोप्ट...
विरामीले नै नर्सको हत्या गरेपछि
काठमाडौं । विरामी र अस्प्तालमा उपचार गर्ने नर्सहरुबीच विवाद भइनै रहन्छ । नेपालका अस्प्तालमा मात्रै अरु देशका अस्प्तालमा पनि नर्सको बोली, ब्यबहार, सेवाका बिचमा बिरामी, बिरामीका आफन्त र नर्सबीचमा विवाद ...